Arotava Efa mihavitsy ireo tsy manao azy
Efa mihavitsy ireo olona tsy manao aron-tava mandehandeha eny amin’ny arabe amin’izao. Raha araka ny tatitry ny zandarimariam-pirenena dia sady manao fanentanana izy ireo no mizara ho an’izay tsy manana nefa manasazy ihany koa.
Ho an’ny teto amin’ny Faritra Analamanga ohatra dia miisa 513 ireo nosaziana sy nanarina raha 1034 ireo aron-tava nozaraina. Tany amin’ny Faritra Matsiatra Ambony indray dia miisa 170 ireo aron-tava nozaraina raha 102 kosa ireo olona tsy nanara-dalana. Ho an’ny Faritra Atsinanana indray dia miisa 354 ireo nanaovana fanentanana sy nosaziana raha 1380 ny aron-tava nozaraina. Tsy latsa-danja amin’izany ny Faritra Vakinankaratra izay nozaraina aron-tava miisa 400 raha 394 no nanaovana fanentanana. Nahatratra 1054 araka izany ireo tsy nanana-dalana raha 2984 kosa ireo aron-tava nozaraina. Raha araka ny fantatra moa dia nisy tamin’ireo tsy nanara-dalana omaly no namafa ireny trano fivoahana iraisana ireny raha asa famafan-dalana hatrany no nahazatra ny rehetra hatramin’izay. Hiitatra amin’ny asa fanamboarana zaridaina sy fanadiovana sekoly izany ho tombontsoan’ny besinimaro.